Qadar iyo Sucuudiga oo u dhow inay heshiis gaadhaan | Berberanews.com
Home WARARKA Qadar iyo Sucuudiga oo u dhow inay heshiis gaadhaan
Riyaad-(Berberanrws)-Qatar iyo Sacuudi Carabiya waxay ku dhow yihiin inay heshiis hordhac ah gaadhaan si loo soo afjaro muranka soo jiitamayay ee dalalka deriska Khaliijka ee iska soo horjeeday muddo ka badan saddex sano.
Heshiiska la filayo ayaa yimid ka dib markii la taliyaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Jared Kushner uu gaadhay gobolka Khaliijka isagoo qeyb ka ah dadaalkii ugu dambeeyay ee lagu xallinayo xiisadda Khaliijka, ka hor inta aanu maamulka Trump xafiiska ka tagin bisha Janaayo.
Safarka Kushner waxaa ka mid ahaa kulammo uu la yeeshay Dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan magaalada Riyadh horraantii toddobaadkan, iyo Amiirka Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, oo ku sugan Doha Arbacadii.
Kushner wuxuu tan iyo markii uu ka tagay Qatar, sida ay ogaatay Al Jazeera. Arbacadii, Wall Street Journal (WSJ) ayaa soo xigatay saraakiil Mareykan ah oo sheegaya in muhiimada ugu weyn ee wadahadalka uu noqon doono xalinta muranka ka dhashay ogolaanshaha in diyaaradaha Qatar ay maraan hawada Sacuudiga iyo Imaaraadka (UAE).
Previous articleHaweenay socdaal lugta ah ku soo martay 141 dal oo Somaliland soo gaadhay
Next articleCIA officer killed in Somali raid on suspected al-Shabaab bomb-maker